မီဒီယာနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအကြားဆက်နွယ်မှု - ရှည်လျားသောလေ့လာမှု (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2015 နိုဝင်ဘာ 20 ။
Vandenbosch L ကို1, ဗန် Oosten JM1, ပတေရုသ J ကို1.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (IP) ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ထိတွေ့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
1,765 မြီးကောင်ပေါက်အသက် 13-17 နှစ်ပေါင်းအကြားတစ်ဦးနှစ်ဦး-လှိုင်း panel ကိုစစ်တမ်းပေါ်တွင်အခြေခံကျနော်တို့စောင့်ကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာလူမှုမီဒီယာအပေါ်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့မြီးကောင်ပေါက်နှိုးဆွပေးကြောင်းတွေ့ရှိရ. အလှည့်၌, လူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤ ဆက်ဆံရေးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားအလားတူခဲ့ကြသည်။
ထို့အပွငျမြီးကောင်ပေါက်အွန်လိုင်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှိုင်းယှဉ်ဆိုလိုသည်မှာပင်မ) ၏ types များအကြားခွဲခြားပုံရသည်။
လော်ရာ Vandenbosch, Ph.D, Johanna MF ဗန် Oosten, Ph.D နှင့် Jochen ပတေရုသ, Ph.D
ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန ASCoR, အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်၏အမ်စတာဒမ်ကျောင်း။
ဒေါက်တာ Johanna MF ဗန် Oosten
ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန ASCoR ၏အမ်စတာဒမ်ကျောင်း
1001 Ng အမ်စတာဒမ်
social media မြီးကောင်ပေါက်နေ့စဉ် News Feeds နဲ့ post ကို updates များကိုစစ်ဆေးနေအတူမြီးကောင်ပေါက်အကြားအလွန်အမင်းရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။1 မကြာသေးမီကသုတေသနပြုမြီးကောင်ပေါက်လည်းမိမိတို့လိင်ပေးသောပုံရိပ်တွေဖြန့်ဝေဖို့လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြသခဲ့ပါသည်။2-4 ဥပမာအားဖြင့်, အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငါးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တဦးတည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏အွန်လိုင်းပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်လိင်ထုတ်ဖော်ပုံရိပ်တွေပြဖော်ပြခဲ့တယ်။5 နောက်ထပ်လေ့လာမှုတက်ဆယ်ကျော်သက် profile များကိုတဝက်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး sexy ပုံရိပ်ဆံ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။6 သို့သော်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ပြချက်များ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်သုတေသနပြုစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်း5-7 နည်းနည်းမြီးကောင်ပေါက်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်း profile များကိုအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ဆက်ဖို့ရှေးခယျြဘာဖြစ်လို့အပေါ်လူသိများသည်။
ဒီနောက်ခံဆန့်ကျင်, ပညာရှင်များလူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ပြချက်များ၏ပျံ့နှံ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအကြောင်းအရာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများပျံ့နှံ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဟန်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။7-9 အကျိုးဆက်အားပညာရှင်များအစုလိုက်အပြုံလိုက်လေ့လာနေ10 အဖြစ်လူမှုရေး8 အသုံးပြုသူများမှထုတ်လုပ်သောလိင်အကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေရန်လူမှုမီဒီယာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်မီဒီယာများကသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ ဒီအားနည်းချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့၊ လက်ရှိလေ့လာမှုကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာကလိင်အကြောင်းအရာတွေကိုထိတွေ့မှုနဲ့လူမှုမီဒီယာတွေမှာယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုတွေအကြားဆက်စပ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြီးကောင်ပေါက်အကြားကသူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသူတို့၏မြင့်ဒီဂရီ၏လိင် oriented အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (IP) ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားဆယ်ကျော်သက်ပရိသတ်တွေ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုဆွဲဆောင်11,12 နှင့်လိင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။11,13-16 အိုင်ပီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများစုမှာတစ်ဦးချင်းစီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ညစ်ညမ်းကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိများမှာ17,18 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ရာခိုင်နှုန်းကမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်အတူ။19 အိုင်ပီ "ပညာရှင်ပီသစွာထုတ်လုပ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုသူကိုနှိုးဆှရည်ရွယ်သည်ဟုအင်တာနက်ပေါ်ရှိသို့မဟုတ်ကနေအသုံးပြုသူ-generated ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ (ကလစ်ပ်) အဖြစ်ဖော်ပြထားနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏလိင်အင်္ဂါပေါ်တွင် close-up နဲ့ unconcealed လမ်းအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်ပါးစပ်, စအိုနှင့်မိန်းမကိုယ်ထိုးဖောက်မှု, အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပုံဖော်။ "19(pp1015-1016) အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် IP နှစ်ခုလုံးမှန်မှန်စံပြအလောင်းတွေဖော်ကျူးနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံအလေးပေးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။20-24
ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏အရေးပါမှုကိုမှဤမီဒီယာများ၏မကြာခဏစားသုံးသူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုဆက်သဖို့ပိုရှိုဖြစ်နိုင်သည်။ လူမှုသိမြင်မှုသီအိုရီ25 (မီဒီယာအကြောင်းအရာအတွက်ဆွဲဆောင်မှုမော်ဒယ်များများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစောင့်ကြည့်ဥပမာ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မက်လုံးပေးဖို့ထိတွေ့မှု (ဥပမာ, အစောင့်ကြည့်လေ့လာမော်ဒယ်များ၏အပြုအမူနှင့်ဆင်တူကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ) အညီပြုမူဖို့တစ်ဦးချင်းစီကိုလှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါ posits ။ ထို့ကြောင့်သုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုချိန်းတွေ့စတင်တစ်ဦးနုပျိုအသက်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်26 နှင့်ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကို။26 လေ့လာရေး IP ကို ​​အသုံးပြု. အပြုသဘောထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ကြပြီ27-29 နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတစ် သာ. ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုး။30 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီဒီယာရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဗဟုသုတမရှိသေးပါ။ ကြိုတင်သုတေသနပြုချက်အရလူငယ်အသုံးပြုသူများ၏အပြုအမူသည်မီဒီယာများ၏မော်ဒယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ (H1) နှင့် IP (H2) တို့မှလူမှုမီဒီယာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုကိုအပြုသဘောဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
Next ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်အသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းစိတ်ကူးပုံရသည်။ သိမှု dissonance သီအိုရီဥပမာ, တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူနှင့်အတူသိမှုဗညျြးကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေဖို့လှုံ့ဆျောဖြစ်ကြောင်း posits ။31 တစ်ဦးချင်းစီအရှင်သိမြင် dissonant သတင်းအချက်အလက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်ထွက်လာသောလှိုက်လှဲမှုမရှိကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်။31 ဒီလိုင်းအတွက်, longitudinal သုတေသနလိင်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏ရွေးချယ်ရေးနှိုးဆွပေးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။32 မြီးကောင်ပေါက်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြလျှင်အညီ, သူတို့ဇာတ်ကောင်လည်းအဖြစ် sexy သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြရသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအကြောင်းအရာ, စားသုံးပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သလူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ (H3) နှင့် IP ကို ​​(H4) မှထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်မည်ကို hypothesize ။ ယူဆချက် 1-4 အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် ပုံ 1.
သဖန်းသီး။ 1 ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ) နှင့်လိင်မီဒီယာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တိုင်တင်ဆက်ခြင်းတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုထိတွေ့မှုကြားဆက်နွယ်မှုအတွက်ယူဆချက်ပုံစံ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်း Self-တင်ဆက်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလေ့လာသည့်အခါကအလားအလာကျား, မကွဲပြားမှုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျား, မလူမှုဆက်ဆံရေးသီအိုရီမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကွဲပြားခြားနားပေမယ့်ဖြည့်စွတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူဆီသို့ socialized ဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။33 ယောက်ျားလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍမှမျှော်လင့်ထားကြသည်နေစဉ်, မိန်းကလေးတွေတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ passive အခန်းကဏ္ဍချမှတ်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။33 ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောက်ျားလေးများသည်ထက်မိန်းကလေးတန်ဖိုးသည်33 အရာအလှည့်အတွက်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ဆက်ထားပါတယ်မိန်းကလေးများနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။5,34-36
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားခြားနားချက်များကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် ယောက်ျားလေးများ၏တက်ကြွသောအခန်းကဏ္, နှင့်အညီမကြာသေးမီက longitudinal လေ့လာမှု37 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့ခြင်းသာယောက်ျားလေးများကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှိုးဆွပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသာမိန်းကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ တစ်ရွေးချယ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုမိန်းကလေးများအကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်နေစဉ်လေ့လာမှုအရှင်, မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုယောက်ျားလေးများကြားတွင်ဖြစ်ပွားကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မိန်းကလေးငယ်များ (ကသူတို့ passive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူလျော့နည်းတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့မီဒီယာအသုံးပြုမှုအတွက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ validation ကိုရှာအံ့သောငှါအနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့မှု, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတက်ကြွစွာရှာဖွေယောက်ျားလေးများအားပေးထားသည်။37 သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများ38-40 ကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကျား, မကွဲပြားမှုကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်မှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီနောက်ခံဆန့်ကျင်, ငါတို့ကျားအလယ်အလတ်ရှိမရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ / IP လူမှုမီဒီယာ (RQ1) အပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုမှထိတွေ့မှုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုမေးပါ။
လက်ရှိလေ့လာမှု6လတစ်ခုကြားကာလနှင့်အတူသုံးလှိုင်း panel ကိုလေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလှိုင်းတံပိုးအပေါ်ဆွဲယူလာသည်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလှိုင်းတံပိုးမေလနှင့်အောက်တိုဘာလ 2013 အတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုလူကြိုက်များအဖြစ်မှန်ပြပွဲတစ်ခုကိုအချိန်ကာလအတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ငါတို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ဖော်ပြချက်တွင်ကြည့်ပါ) ကိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလှိုင်းတံပိုးရွေးချယ်ထားကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု 13 နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်မှ 17- တို့တွင်အထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နမူနာများနှင့်ကွင်းဆင်း Veldkamp တစ်ဦးဒတျချြစစ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းများကပြုမိခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ နမူနာကျပန်း Veldkamp ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ရှိပြီးသားတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အွန်လိုင်း access ကို panel ကိုမှနမူနာခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်ဖို့အကြောင်း 20 မိနစ်လုယူသောအိမ်တွင်အွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာအတွက်ဖြည့်သင်တန်းသားများ။ တစ်ဦးချင်းစီပြီးစီးခဲ့မေးခွန်းလွှာအဘို့, သင်တန်းသားများကို5ယူရိုတစ်ဦးလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အခြေခံမှာ 2,137 ဆယ်ကျော်သက်ပါဝင်ခဲ့။ ခြောက်လအကြာတွင် 1,765 မြီးကောင်ပေါက် (တဖန်ဆွဲဆောင်မှုနှုန်း = 17.4 ရာခိုင်နှုန်း) ထပ်မံပါဝင်ခဲ့။ Pillai's Trace ကိုသုံးပြီး MANOVA က Wave 1 တွင်ပါ ၀ င်သောဖြေဆိုသူများနှင့်အသက်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ လိင်၊ လိင်ဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှု၊ IP နှင့်ထိတွေ့မှု၊ - တင်ပြမှု, V = 0.005, F(6, 2130) = 1.73, p = 0.11, ηp2 = 0.005 ။ ဒါဟာ attrition ဒေတာအတွက်စနစ်တကျဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေထို့ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုနှင့်အကြေးရှိဘို့ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ ဖော်ပြရန်စာရင်းအင်းနှင့်သုည-အမိန့်ဆက်စပ်မှု (N = ၂၀1,765)
ဖြေဆိုသူသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မညွှန်ပြ (;0= မိန်းကလေး 1 = ကောင်လေး) ။ လိင်တိမ်းညွတ် H-စကေးဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်41 နှင့် recoded ပေတရုနှင့် Valkenburg အားဖြင့်လျှောက်ထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ19 (0 = သီးသန့်လိင်ကွဲ; 1 = မဟုတ်သီးသန့်လိင်ကွဲ) ။
Likert စကေး (၇) မှတ်ဖြင့် (၁ - ဘယ်တော့မှ ၇ သို့မဆိုဖြစ်စဉ်တိုင်းတွင်) ၆- လမတိုင်မီက MTV ၏“ Jersey Shore” နှင့် (ခ) MTV ၏“ Geordie Shore” သည်အဖြစ်မှန်ပြပွဲနှစ်ခုကိုဘယ်လောက်အထိစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်ကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ စစ်တမ်း။ ဤလိင်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များကိုအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းမတိုင်မီနှင့်စဉ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
IP ကိုမှ exposure
ဖြေဆိုသူသောသူတို့သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှင်းလင်းစွာထိတွေ့လိင်အင်္ဂါနှင့်အတူ (ခ) ဗီဒီယိုများ, လူတွေလိင်ဆက်ဆံနေကြရသော (ဂ) ပုံများ, (ဃ) သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအတွက် (က) ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်လိင်အင်္ဂါနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေ, အင်တာနက်ပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ဖို့အတိုင်းအတာညွှန်ပြ အရာကလူ (တစ်ရက် = 1 အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှတဆင့်ဘယ်တော့မှ = 7) ခုနစ်မှတ်စကေးပေါ်တွင်လိင်ဆက်ဆံနေကြတယ်။42 (; ကှဲလှဲ = 1 ရာခိုင်နှုန်းကိုကရှင်းပြသည်အချိန် 3.56 eigenvalue = 88.96) ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများအားလုံးတဦးတည်းအချက်ပေါ်တင်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူလူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုလျှင်, သူတို့သည်သူတို့တစ်တွေ sexy အကြည့်နှင့်အတူ (က) မိမိတို့ကိုယ်ကိုပုံဖော်ဓါတ်ပုံတွေကိုအပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့ပုံကိုမကြာခဏအတိတ်6လအတွင်းအဘို့နှင့်ခုနစ်မှတ် Likert စကေး (= ဘယ်တော့မှအမြဲ 1 = ဖို့ 7) ရက်နေ့မှာညွှန်ပြခိုင်းတယ် (ခ) တစ်ဦး, sexy ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက် sexy ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, (ဂ) scantily ဝတ်ဆင် (ဥပမာ, ရေချိုးဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်အတွင်းခံ) နှင့် (ဃ) နှင့်အတူ။ လှိုင်းတံပိုးတို့သည် 1 နှင့် / သို့မဟုတ်2(မှာလူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုဘယ်တော့မှခဲ့တဲ့မြီးကောင်ပေါက်n = ၂၀179)a သူတို့တစ်တွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့ကြပါပြီဘယ်တော့မှအဖြစ်, ( "ဘယ်တော့မှ") code ကို 1 ပေးထားခဲ့ကြသည်။ (; ကှဲလှဲ = 1 ရာခိုင်နှုန်းကိုကရှင်းပြသည်အချိန် 2.81 eigenvalue = 70.13) ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဦးတည်းအချက်ပေါ်တင်ဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးအကြံပြုသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (software ကို Amos 7), အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းနည်းလမ်းသည်ယူဆချက်နှင့်ထဲတွင်မော်ဒယ်စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် ပုံ 1။ တစ်ခုချင်းစီကိုငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသောမန်နီးဖက်စ်ပစ္စည်းများအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှစ်ခုတို့အားထငျရှားစပစ္စည်းများအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်; အိုင်ပီနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်း Self-တင်ဆက်မှုမှထိတွေ့မှုအသီးအသီးလေးကျမှုကိုထငျရှားပစ္စည်းများ (ဆောင်ရွက်ချက်များအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) တို့ကခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာသုတေသနနှင့်အတူတသမတ်တည်း,42 အသက်အရွယ်နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်၏အခြေခံတန်ဖိုးများကိုထိန်းချုပ် variable တွေကိုအဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့် endogenous variable တွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတပါး, အခြေခံမှာထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုနှင့်လွတ်လပ်သော variable တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ covary ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အလားတူပင်အချိန်2နှင့်တူညီပစ္စည်းများကို၏အမှားအသုံးအနှုန်းများမှာမီဒီယာ variable တွေကိုများ၏နှောင့်အယှက်အသုံးအနှုန်းများအချိန် 1 နှင့်အချိန်2အကြား covary ဖို့လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။
ပုံမှန်ယူဆချက်ကိုမကြာခဏလိင်သုတေသနအတွက်ချိုးဖောက်အတိုင်း,19 အဲဒီနေရာက Application (95 ရာခိုင်နှုန်းကိုဘက်လိုက်မှု-တညျ့ bootstrapped ယုံကြည်မှုကြားကာလ; 1,000 နမူနာ) ပုံမှန်စမ်းသပ်သီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးအဓိပ်ပာစမ်းသပ်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျား, မကွဲပြားမှုဆနျးစစျဖို့, တစ်ဦး unconstrained မော်ဒယ်၏မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ) လူမှုရေးမီဒီယာနှင့် 1 (ထိတွေ့မှုအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်စေသည့်အတွက်ကျပ်မော်ဒယ်၏မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် သို့မဟုတ် (2) IP ကိုယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ) အကြားတန်းတူညီမျှဖြစ်ဖို့သတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါχ2-model နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်တန်ဖိုးနှင့်ΔCFIကျား, မကွဲပြားမှုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။43,44
အဆိုပါမော်ဒယ်တွေ့မြင်, သုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုဘို့ (ထိုအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်မထိုက်မတန်ခဲ့ စားပွဲတင် 1; ကောင်းမြတ်ခြင်း-of-မထိုက်မတန်စာရင်းဇယားများအတွက်တွေ့ စားပွဲတင် 2) ။ အချိန် 1 မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကဲခတ်အပြုသဘောကြည့်မြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု parameters တွေကိုအဘို့ (အချိန်2မှာလူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုဟောကိန်းထုတ် စားပွဲတင် 2) ။ ထိုမှတပါး, အချိန် 1 မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်း Self-တင်ဆက်မှုအပြုသဘောအရှင် H2 နှင့် H1 supporting, အချိန်3မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အချိန် 1 မှာ IP ကိုအကဲခတ်အချိန်2မှာလူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အချိန် 1 မှာလူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအချိန်2မှာ IP ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ H2 နှင့် H4 ကိုမထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်း MODEL (Key ကို Paths များအတွက်ရလဒ်များN = ၂၀1,765)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့် IP ကိုများအတွက်မော်ဒယ်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှု (စားပွဲတင် 2; RQ1) ကိုχကြောင်းညွှန်ပြ2-difference စမ်းသပ်သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့နှင့် unconstrained နှင့်သတ်မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံး၏ CFI တန်ဖိုးများ (ΔCFI) အကြားခြားနားချက်များ 0.01 ထက်မပိုခဲ့ဘူးသော။ အဆိုပါ unconstrained မော်ဒယ်များ၏မော်ဒယ်မထိုက်မတန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအကြားမဟုတ်သလိုအိုင်ပီနှင့်လူမှုရေးအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာအတားအဆီးမော်ဒယ်ဖို့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာအတားအဆီးပုံစံဤသို့သာလွန်မခဲ့ မီဒီယာကျားမကိုဖြတ်ပြီးတန်းတူဖြစ်။ အဘယ်သူမျှမကျား, မကွဲပြားမှုပေါ်ထွက်လာသကဲ့သို့, unconstrained မော်ဒယ်များ၏လမ်းကြောင်းကိုရလဒ်များကိုအတွက်တင်ပြကြသည်မဟုတ် စားပွဲတင် 2.
ဤလေ့လာမှုသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားကိုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုကိုအွန်လိုင်းတွင်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အဓိကသတင်းမီဒီယာများတွင်လိင်သတင်းစကားများ၏အရေးကြီးပုံကိုလေ့လာမှုကထောက်ပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်တိုင်တင်ပြခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းအိုင်ပီနှင့်ထိတွေ့မှုကိုလေ့လာသည့်အခါအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ဤလေ့လာမှုသည်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။
ပထမဦးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအကြား, အအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားလူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုမြီးကောင်ပေါက်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဘယ်လိုပြုမူထိခိုက်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးများ၏အလားအလာမီးမောင်းထိုးပြ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုချမှတ်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်, အထူးသဖြင့်, ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထွက်ရှာကွပါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာအလေ့အကျင့်မော်ဒယ်အဖြစ်သီအိုရီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်သိသိဖြစ်စဉ်များမှလူမှုရေးမီဒီယာအချက်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာနှင့်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအကြားကိုပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုအပြန်အလှန်ပုံစံ,45 နှင့်အားဖြည့်လိမ်မော်ဒယ်။46 ထိုကဲ့သို့သောသိသိသာသာဖြစ်စဉ်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုကိုအွန်လိုင်းနှင့်အဓိကမီဒီယာများမှလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သြဇာညောင်းသည်။ Reality TV သည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်“ ယုံကြည်စိတ်ချရသော” နှင့်“ သူတို့ကဲ့သို့” မီဒီယာရှိလူများသို့မဟုတ်အခြေအနေများကိုရှာဖွေလေ့ရှိသောကြောင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသက်ဆိုင်နိုင်သည်။45,47 သို့သော်စာပေလည်းမြီးကောင်ပေါက်သည်အခြားလူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။48 ထိုကဲ့သို့သောဂီတဗီဒီယိုနှင့်ဆပ်ပြာ Opera ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအမျိုးအစားများအဖြစ်ကိုလည်းမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်ဖော်ကျူး,24,49 အနာဂတ်သုတေသနကဤအမျိုးအစားကိုကြည့်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်း Self-တင်ဆက်မှုအကြားအလားတူသိသိဖြစ်စဉ်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းလိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်, ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်ဖို့ Differential ဖြစ်ပေါ်နိုင်အဖြစ်မီဒီယာသီအိုရီ, (အများဆုံး) မီဒီယာသက်ရောက်မှုတပြင်လုံးကို (ဆယ်ကျော်သက်) လူဦးရေအဘို့အညီအမျှမကိုင်စေခြင်းငှါမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။50 အထူးသဖြင့်သဘောထားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လွယ်သည့်အချက်များ (လူပုဂ္ဂိုလ်၏အတိုင်းအတာဟုဖော်ပြသည်) သည်မီဒီယာအသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အချက်သည်မီဒီယာသုံးစွဲသူများအကြားမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေနိုင်သည်။50 လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကျား, မလူမှုမီဒီယာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာသို့မဟုတ် IP မှထိတွေ့မှုအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အရေးပါသောသဘောလွယ်ကူစွာထိခိုက် variable ကိုမပေးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်အခြားသဘောထားလွယ်ကူစွာထိခိုက် variable တွေကိုယခုထိဒီဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ IP ကိုထိတွေ့မှုနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုလက်ရှိလေ့လာမှုမှာသက်ဆိုင်တဲ့ကြပေမဲ့, ဒီဆက်ဆံရေးဟာအရှင်နေဆဲအိုင်ပီသို့မဟုတ် IP ကိုရွေးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်နေသောအသုံးပြုသူအုပ်စုများအကြားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီအမြင်ထဲမှာ, ဆိုင်တဲ့စာပေရမှတ်မြင့်မားတဲ့အာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူရန်,51 hypergendered မြီးကောင်ပေါက်,52 တစ်ခုနှင့်အစောပိုင်း pubertal status ကိုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်40 အရေးကြီးသောအုပ်စုများဆနျးစစျဖို့အဖြစ်။
သူကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကွဲပြားသောကြောင့်, IP ကိုထိတွေ့နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုသက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှု5,7 IP ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်သာလိင်ပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်မသင့်လျော်စံနမူနာအဖြစ်အိုင်ပီအတွက်သရုပ်ဆောင်တွေရိပ်မိပေမည်။ ဒီဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အညီ, အရည်အသွေးသုတေသနမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်း Self-တင်ပြချက်များစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာအောင်ကြောင်းပြသထားပါတယ် "slutty ။ "53 အလားတူပင်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအိုင်ပီအတွက်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာအဖြစ်အလားတူထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အရှင် IP ကိုလောင်ဖို့လှုံ့ဆျောမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်အနည်းဆုံးကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအတိုင်းအတာသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလူမှုမီဒီယာတွင်တင်ပြခြင်းရှိမရှိကိုသာစစ်ဆေးသည်၊ သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်များမိမိတို့ကိုယ်ကိုမည်သို့တင်ဆက်သည်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖော်ပြပေးသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏အွန်လိုင်းတင်ဆက်မှုများတွင်ပင်မမီဒီယာမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများမည်သို့ပါဝင်သည်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင်အာရုံနှင့်နှုတ်ဖြင့်ရေးသားချက်များအပါအ ၀ င်လိင်ဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အစီအမံများလိုအပ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုမှထိတွေ့မှုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကြိုတင်မီဒီယာသုတေသနနှင့်အညီပေမယ့်, အသေးစားခဲ့ကြသည်54 နှင့်တည်ငြိမ်ရေးသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ် longitudinal သုတေသနအပေါ်စာပေ။55 ထို့အပြင်ဤအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်ပါဝင်သည်ဟာမြီးကောင်ပေါက်အကြားတစ်ဦး sexy Self-တင်ဆက်မှုများမဟုတ်ဘဲအနိမ့်ဖြစ်ပျက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဒီနိမ့်ကြိမ်နှုန်းရမှတ်နေသော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားမှထိတွေ့မှုများနှင့်အွန်လိုင်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးနေဆဲဒီဘာသာရပ်အပေါ်အနာဂတ်သုတေသန၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စာပေ56 လေ့လာမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာ (ဆိုလိုသည်မှာ, အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ) တွင်ရာထူးတိုးလိင်မက်ဆေ့ခ်ျကတခြားသတင်းရင်းမြစ် (ဥပမာ, အခြားခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်ရွယ်တူချင်းအနေဖြင့်လူမှုရေးဆင်တူလက်ခံရရှိနေကြတယ်အဖြစ်မီဒီယာများ၏ပင်သေးငယ်တဲ့သက်ရောက်မှုနေဆဲဆက်စပ်မှုရှိနိုငျသောအကြံပြု2,53) ။ အတူတကွဤလူမှုဆက်ဆံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာပိုမိုအားကောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ cumulate လိမ့်မည်။56
ယေဘုယျအားလက်ရှိလေ့လာမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအကြောင်းအရာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ပုံဖော်ခြင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့မြီးကောင်ပေါက်လှုံ့ဆော်ရန်အလားအလာရှိကြောင်းပြသထားတယ်။ အလှည့်၌, ခေတ်ရေစီးကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြသူကိုလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအနာဂတ်သုတေသနထို့ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့်လိင်လူမှုမီဒီယာအပေါ် oriented အပြုအမူတွေအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအကြားဆက်စပ်မှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာပိုကောင်းလာစေဖို့မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး။ ယင်းအစီရင်ခံအားလုံးသည်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ ရလဒ်များကို အပိုင်းကိုလည်းအချိန် 1 နှင့် / သို့မဟုတ်အချိန်2(မှာ social networking site ကိုသုံးဘယ်တော့မှသူသင်တန်းသားများကို (SNS) ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့နမူနာအတူကောက်ယူခဲ့သည်N = 1,586) ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်ရလဒ်များသည်အချိန် ၁ နှင့် / သို့မဟုတ်အချိန် ၂ တို့တွင် SNS ကိုတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ဖူးသောပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သည့်နမူနာအတွက်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များနှင့်ဆင်တူသည် (N = 1,765) ။ ဤထပ်ဆောင်းရလဒ်များကိုသက်ဆိုင်ရာစာရေးသူထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာသုတေသနတတိယစာရေးသူမှသိပ္ပံသုတေသနများအတွက်နယ်သာလန်အဖွဲ့အစည်း (NWO) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
1 ။ et al တစ်ဦးက Lenhart K ကို Purcell, တစ်ဦးကစမစ်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများအကြား (2010) လူမှုမီဒီယာနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Pew အင်တာနက်ကိုအမေရိကန်ဘဝက Project မှ။
2. SM Doornwaard, MA Moreno, RJJM van den Eijnden, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏လိင်နှင့်ရင်ခုန်စရာရည်ညွှန်းချက်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေး 2014 ခုနှစ်ဂျာနယ်; 55: 535-541 ။
3. RM Perloff ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္concernsာန်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ - သီအိုရီဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်သုတေသနအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်အခန်းကဏ္ 2014 71; 363: 377-XNUMX ။
4. JMF ဗန် Oosten, J ကိုပတေရု, ငါ Boot ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအွန်လိုင်းတင်ဆက်မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုများကိုရှာဖွေခြင်း။ လူငယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် 2015 ခုနှစ်ဂျာနယ်; 44: 1078-1091 ။
5 ။ S က Kapidzic, SC Herring ။ ဆယ်ကျော်သက်ပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံတွေအတွက်လူမျိုး, ကျား, မ, နှင့် Self-တင်ဆက်မှု။ မီဒီယာသစ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း 2015; 17: 958-976 ။
6 ။ L ကို Crescenzi, N ကို Arauna ငါ Tortajada ။ privacy, Self-ထုတ်ဖော်နှင့် social networking site များအပေါ်စပိန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ Self-image ကို။ Fotolog ၏ဖြစ်ရပ်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း 2013; 26: 65-78 ။
7 ။ PC ကွန်ပျူတာခန်းမ, JH အနောက်, E ကို McIntyre ။ အတွက်အမျိုးသမီး Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ MySpace.com ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံတွေ။ လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု 2012; 16: 1-16 ။
8 ။ M က Prieler, ဂျေ Choi ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်လူမှုမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသနနယ်ပယ်ကိုတိုးချဲ့။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2014; 71: 378-388 ။
9 ။ တစ်ဦးက Hirdman ။ (2007) " '' ကြင်မဲပေး ကျေးဇူးပြု. ... ။ '" On-line ကိုကျားများ, ။ S က Knudsen, L ကို Lofgren-Martenson, S ကို Mansson, eds ၌တည်၏။ မျိုးဆက် P ကို? လူငယ်, ကျား, မများနှင့်ညစ်ညမ်း။ ကိုပင်ဟေဂင်: ပညာရေးစာနယ်ဇင်း, စစ၏ဒိန်းမတ်ကျောင်း 151-170 ။ ။
10 ။ EW Owen, RJ Behun, JC Manning, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်ပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနသုံးသပ်ချက်။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 2012; 19: 99-122 ။
11. BJ ဘွန်း, KL Drogos ။ ကမ်းခြေရှိလိင် - ဂျေရှိုးထိတွေ့မှုနှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်ဆံရေးတွင်ဆန္ဒအလျောက်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် parasocial ဆက်ဆံရေးကိုဖျန်ဖြေသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2014; 17: 102-126 ။
12 ။ K သည် Barton ။ အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြား programming နဲ့မတူကွဲပြားဆန္ဒပြည့်: ရရှိသောဆန္ဒပြည့်ပေါ်အကြောင်းအရာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ 2009 ၏ဂျာနယ်; 53: 460-476 ။
13 ။ LM ရပ်ကွက်, L ကိုရိဒ်, SL Trinh, et al ။ (2014) လိင်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ။ ။ et al DL Tolman, LM စိန်ဂျေအေ Bauermeister အတွက် eds ။ လိင်နှင့်စိတ်ပညာ၏ယားလက်စွဲစာအုပ်။ Volume ကို2။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး, စစ 373-427 ။ ။
14 ။ K သည် Farrar, D ကို Kunkel, E ကို Biely, et al ။ ချုပ်အချိန် programming ကိုကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျ။ လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု 2003; 7: 7-37 ။
15 ။ : D Kunkel K ကို Eyal, E ကို Donnerstein, et al ။ ဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးမက်ဆေ့ခ်ျများ: နှိုင်းယှဉ်အကြောင်းအရာခေတ်ရေစီးကြောင်း 1997-2002 ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2007; 9: 595-622 ။
16 ။ SL စမစ်။ MTV ရဲ့အပေါ်အကဲဖြတ်အကြမ်းဖက်မှု, လိင်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: Dr. Dre ကနေပယ်ချရန်။ မီဒီယာဆက်သွယ်ရေး 2005 အတွက်အရေးပါလေ့လာရေး; 22: 89-98 ။
17 ။ တစ်ဦးကŠevčíková K ကို Daneback ။ အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ Developmental စိတ်ပညာ 2014 ၏ဥရောပဂျာနယ်; 11: 674-686 ။
18. M က Weber အို Quiring, G Daschmann ။ ရွယ်တူချင်းများ၊ မိဘများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကိုလေ့လာခြင်း။ ၂၀၁၂ လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ 2012: 16-408 ။
19 ။ J ကိုပေတရုသည် pm တွင် Valkenburg ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ antecedents: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတစ် longitudinal နှိုင်းယှဉ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2011 ၏မော်ကွန်း; 40: 1015-1025 ။
20 ။ DR Arakawa, C ကိုဖလန်းဒါးစ်, E ကို Hatfield ။ ညစ်ညမ်းအတွက်ထင်ရှားကျားမတန်းတူရေးအတွက်မူကွဲဖြစ်ပါသလား တစ်ဦးက Cross-ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာမှု။ Intercultural ဆက်ဆံရေး 2012 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်; 36: 279-285 ။
21 ။ M က Barron, M က Kimmel ။ သုံးညစ်ညမ်းမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: တစ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ဆီသို့။ လိင်သုတေသန 2000 ၏ဂျာနယ်; 37: 161-168 ။
22 ။ M က Klaassen, J ကိုပတေရုသ။ လူကြိုက်များညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ဦးအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအတွက်တန်းတူရေး (၌) ကျား, မ။ လိင်သုတေသန 2015 ၏ဂျာနယ်; 52: 721-735 ။
23. SA Vannier, AB Currie, LF O'Sullivan ။ ကျောင်းသူ / သားများနှင့်ဘောလုံးမိခင်များ - အခမဲ့“ ဆယ်ကျော်သက်” နှင့်“ MILF” အွန်လိုင်းအပြာစာပေများကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ လိင်သုတေသန၏ Jounal 2014; 51: 253-264 ။
24 ။ L ကို Vandenbosch, D ကို Vervloessem, S ကို Eggermont ။ "ကျွန်မရဲ့အသားအရေ-တင်းကျပ်စွာဂျင်းဘောင်းဘီ၌သင်တို့၏နှလုံးပြိုင်ကားရစေခြင်းငှါ,": ဂီတဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ဆက်သွယ်ရေးလေ့လာရေး 2013; 64: 178-194 ။
25 ။ တစ်ဦးက Bandura ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေး၏လူမှုသိမြင်မှုသီအိုရီ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2001; 3: 265-299 ။
26 ။ R ကို Rivadeneyra, MJ Lebo ။ ရုပ်မြင်သံကြား-ကြည့်ရှုအပြုအမူတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ချိန်းတွေ့အခန်းကဏ္ဍသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် 2008 ၏ဂျာနယ်; 31: 291-305 ။
27 ။ SC Boies ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးမှတုံ့ပြန်မှု: အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှလင့်များ။ လူ့လိင် 2002 ၏ကနေဒါဂျာနယ်; 11: 77-89 ။
28 ။ DK Braun-Courville, M က Rojas ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ exposure ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 2009 ၏ဂျာနယ်; 45: 156-162 ။
29. EM Morgan ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ။ လိင်သုတေသန 2011 ခုနှစ်ဂျာနယ်; 48: 520-530 ။
30 ။ တစ်ဦးက Stulhofer, V ကို Busko ငါ Landripet ။ ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, နှင့်လူငယ်လူတို့တွင်စိတ်ကျေနပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2010 ၏မော်ကွန်း; 39: 168-178 ။
31 ။ L ကို Festinger ။ လူမှုရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးကသီအိုရီ။ လူ့ဆက်ဆံရေး 1954; 7: 117-140 ။
32 ။ et al တစ်ဦးက Bleakley, M က Hennessy, M က Fishbein ။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်: မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2008; 11: 443-461 ။
33 ။ DL Tolman, M က Striepe, T ကသဟဇာတ။ ကျားအရေးပါ: ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတစ်ခုမော်ဒယ်တည်ဆောက်နေ။ လိင်သုတေသန 2003 ၏ဂျာနယ်; 40: 4-12 ။
34 ။ J ကို Bailey, V ကို Steeves, ဂျေ Burkell, et al ။ social networking site များပေါ်တွင်ကျား, မကျပုံစံတွေနဲ့ညှိနှိုင်း: "စက်ဘီးမျက်နှာ" မှ facebook ကိုရန်။ ဆက်သွယ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး 2013 ၏ဂျာနယ်; 37: 91-112 ။
35 ။ လေး Manago, ကို MB ဂရေဟမ်, ညနေ Greenfield, et al ။ MySpace ပေါ်တွင် self-တင်ဆက်မှုများနှင့်ကျား, မ။ အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ 2008 ၏ဂျာနယ်; 29: 446-458 ။
36 ။ S ကသီရဲလ်-Stern ပာ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိထိန်းချုပ်မှုထဲကဣတ္: ကျား၏မီဒီယာကိုယ်စားတစ်ဦးဝေဖန်ဆန်းစစ်, လူငယ်နှင့် MySpace.com အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းဟောပြောချက်များထဲမှာ။ Girlhood လေ့လာရေး 2009; 2: 20-39 ။
et al 37. E Frison, L ကို Vandenbosch, J ကို Trekels ။ တေးဂီတရုပ်မြင်သံကြားထိတွေ့မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု - ရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများ၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်အခန်းကဏ္ 2015 72; 183: 197-XNUMX ။
38 J ကိုပေတရု, pm တွင် Valkenburg ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ထိတွေ့မှု - ရှည်လျားသောလေ့လာမှု။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 2009; 35: 171-194 ။
39. L ကို Vandenbosch, S ကို Eggermont ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်မီဒီယာ၏အခန်းကဏ္: - အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သောမိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်စဉ်၏ရှင်းလင်းတန်ဖိုးကိုရှာဖွေခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ 2014 မော်ကွန်းတိုက်; 44: 729-742 ။
40 ။ L ကို Vandenbosch, S ကို Eggermont ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်: အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများနှင့် pubertal status ကို၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် 2012 အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်; 23: 621-634 ။
41 ။ AC အ Kinsey, WB Pomeroy, အီးမာတင်။ လူ့အထီးအတွက် (1948) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia တွင်, PA: Saunders ။
42 J ကိုပေတရု, pm တွင် Valkenburg ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ထိတွေ့မှု - သုံးလှိုင်း panel လေ့လာမှု။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2008; 11: 207-234 ။
43 ။ BM Byrne ။ (2010) Amos နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: အခြေခံသဘောတရားများ, application များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း။ Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum ။
44 ။ GW ဖြစ်သောချုံကောင်း, RB Rensvold ။ တိုင်းတာခြင်းလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုစမ်းသပ်ဘို့ကောင်းမြတ်ခြင်း-of- မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းတန်ဖိုးဖြတ်ဆန်းစစ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း: တစ်ဦးက Multidisciplinary ဂျာနယ် 2002; 9: 233-255 ။
45 ။ JR သံမဏိ, JD ဘရောင်း။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကအခန်းယဉ်ကျေးမှု: နေ့စဉ်အသက်တာ၏အခြေအနေတွင်မီဒီယာလေ့လာနေ။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက် 1995 ၏ဂျာနယ်; 24: 551-576 ။
46 ။ MD Slater ။ လိမ်အားဖြည့်: မီဒီယာကို select နှင့်မီဒီယာသက်ရောက်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းအမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ 2007; 17: 281-301 ။
47 ။ JR သံမဏိ။ ဆယ်ကျော်သက်လိင်နှင့်မီဒီယာအလေ့အကျင့်: မိသားစုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် factoring, သူငယ်ချင်းနှင့်ကျောင်း။ လိင်သုတေသန 1999 ၏ဂျာနယ်; 36: 331-341 ။
48 LM ရပ်ကွက်, R ကို Rivadeneyra ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များသို့ဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြား၏ပံ့ပိုးမှုများ - ကြည့်ရှုသူ၏ပါဝင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိုင်သောပမာဏ၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသန 1999 ဂျာနယ်; 36: 237-249 ။
49 ။ LM ရပ်ကွက်။ လိင်အကြောင်းပြောနေတာ: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အများဆုံးကြည့်ရှုရန်အဓိကအချိန်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များအတွက်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံ themes များ။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက် 1995 ၏ဂျာနယ်; 24: 595-615 ။
50 ။ ညနေ Valkenburg, J ကိုပတေရုသ။ မီဒီယာသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်ဖို့ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်။ ဆက်သွယ်ရေး 2013 ၏ဂျာနယ်; 63: 221-243 ။
51. L ကို Vandenbosch ငါ Beyens ။ လိင်ဆိုင်ရာတီဗွီကြည့်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုအပေါ်သဘောထား - အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျား၊ ကလေးများနှင့်မီဒီယာ 2014 ဂျာနယ်; 8: 183-200 ။
52. JMF Van Oosten, J Peter, I Boot ။ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများအတွက်အမျိုးသမီးများ၏ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုများမှာ hyperfemininity နှင့် processing ပုံစံ၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသန 2015 ၏ဂျာနယ်; 52: 306-316 ။
53 J ကို Ringrose ။ (၂၀၀၉) Sluts၊ Whores၊ ဆူညံသော slags နှင့် playboy ချည်များ - လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ကျောင်းများတွင်“ sexy” နှင့်ပတ်သက်သောဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များ၏ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု။ C ကိုဂျက်ဆင်, C Paechter, E ကို Renold, eds ၌တည်၏။ မိန်းကလေးများနှင့်ပညာရေး ၃-၁၆ ။ ဆက်လက်စိုးရိမ်မှုများ၊ အစီအစဉ်အသစ်များ။ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်။ ။ McGraw Hill Open University Press၊ စစ ၁၇၀ - ၁၈၂ ။
54 ။ ညနေ Valkenburg, J ကိုပတေရုသ။ မီဒီယာဆိုးကျိုးများသုတေသန၏အနာဂတျအတှကျငါးစိန်ခေါ်မှုများ။ ဆက်သွယ်ရေး 2013 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်; 7: 197-215 ။
55 ။ P ကို ​​Adachi, T က Willoughby ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံအဘို့အဂယက်: longitudinal autoregressive မော်ဒယ်များအတွက်တည်ငြိမ်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါအကျိုးသက်ရောက်အရွယ်အစားပြန်ဆို။ Developmental စိတ်ပညာ 2014 ၏ဥရောပဂျာနယ်; 12: 116-128 ။
56 ။ , G Gerbner, L ကိုစုစုပေါင်း, M ကမော်ဂန်, et al ။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူ (1986) နေထိုင်မှု: စိုက်ပျိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဒိုင်းနမစ်။ J ကို Bryant, D ကို Zillmann ခုနှစ်, eds ။ မီဒီယာသက်ရောက်မှုအပေါ်အမြင်များ။ Hillsdale, NJ: ။ Erblaum, စစ 17-40 ။